Somalida Norwey kunool oo 40.000 gaartay - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Somalida Norwey kunool oo 40.000 gaartay
Jaaliyada soomaaliyeed ee Norwey ayaa tiro ahaan gaartay 40.100 oo qof sanadkii 2015. Taasna ay ka dhigayso qowmiyada sadexaad ee ajnabiga ah ee ugu badan Norwey, marka laga reebo dadka ka yimid Polen iyo Lithuania.
Journaalka ka hadla arimaha dhaqaalaha ee Finansavisen oo warbixintan daabacay ayaa sidoo kale sheegay in sanadkii lasoo dhaafay ay ku korartay tirada dadka soomaaliyeed ee dagan Norwey (2469), oo (1500) kamid ah ay yihiin ciyaal dhashay sanadkii 2015, halka (969) ay ahaayeen dad wadanka ku cusub. Tirada ciyaalka soomaaliyeed ee ku dhashay Norweyna ayaa isku dar noqonaysa(andre generasjon): (11 800) oo lamid ah 29% tirada guud ee soomaalida Norwey. Journaalka ayaa sidoo kale sheegay inay soomaalida dhalmo ahaan lamid tahay dadka ka yimid Polen oo ahaan
Arinta kale xiisaha leh ayaa ah in 31% soomaalida dagan Norwey ay yihiin caruur ka yar dad,da 18 sano. michaheeduna ay tahay in xaalada soomaalida Norwey isbadal weyn ku dhici doono xiliga dhaw, maadaama ay caruurtan jaanis u heestaan inay wadanka sifiican ula qabsadaan waxna ka badalaan tobonka sano ee soo socoto.
Xaga waxbarashada jaamacahada, waxaa Norwey kunool 2111(5,5%) qof oo haysata shahaado jaamacadeed.
Guud ahaan waxaa Norwey kunool 5,2 milyan oo qof, oo 848 000 ay yihiin ajaanib.
Previous articleDukaanka Ikea oo gacan u fidinaya haweenka soomaaliyeed
Next article17 jir soomaali ah oo loo xukumay kufsi uu u gaystay gabar 12 jir ah Sweden.